Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Mgbanwe Culinary na njikwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ India na mmemme teknụzụ nri
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mmemme nri nri India
Otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè dị na Ndị ọbịa ọbịa Chandiwala (CHE) 2021 nke a na-ahazi maka Disemba 9, 2021, bụ "Nri India na-adịgide adịgide - Maka Ọdịnihu ahụike 2021." Ọ bụ asọmpi gbadoro ụkwụ na nyocha ebe ndị na-asọmpi kwesịrị iziga akụkọ nyochara nke na-akọwapụta àgwà iri nri, uru ahụike, usoro na-adigide, na ndụmọdụ nye ndị otu ebumnuche akọwapụtara.
A na-ahazi ihe ịma aka nri nri Korea nke abụọ nke abụọ maka Disemba 11, 2021, site na Korea Cultural Center India na Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management, New Delhi. N'afọ a, a ga-eme mmemme ahụ n'ụdị ngwakọ - ngwakọta nke ịntanetị na offline - na-ekewakwa otu a ka ọ bụrụ ọkachamara nlekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ nri na-emeghe maka mmadụ niile. A na-arịọ ndị sonyere ka ha ziga vidiyo esi nri nke onwe ha nke nri Korea ọ bụla nke nhọrọ ha site na iji ezigbo nri nri ma ọ bụ ngwakọta ọhụrụ na nri India.
A ga-enwekwa asọmpi dị ka "asọmpi nri millet ahụike 2021" na "Dress the Cake Challenge 2021." Asọmpi ndị a bụ maka igosipụta nka site na isi nri na nri ka nwere ike imepụta nke na-atọ ụtọ ebe n'otu oge ahụ na-ahụ na nzikọrịta ozi na-ejikọ ibe ya site na nyiwe dijitalụ.
Vidiyo dị mkpirikpi nke ndị sonyere ga-ekekọrịta ga-ekpe ikpe site na otu ndị ọka ikpe ama ama bụ ndị ga-eleba anya n'ụkpụrụ, usoro, agụụ, ihe ọmụma nke ngwaahịa ahụ na nka iji chọpụta ndị ikpeazụ na onye mmeri kacha. Ndị mmeri niile na ndị sonyere ga-enweta asambodo ebipụtara na-akwado nsonye ha na 20th Virtual Chandiwala Hospitality Ensemble 2021
Ndị ọbịa ọbịa nke Chandiwala na-achọ ịnye ohere maka ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ site n'inye ha ikpo okwu iji gosipụta nkà ha achọpụtala na mbụ.
Ụfọdụ n'ime asọmpi ndị ọzọ bụ isi nke mmemme ahụ bụ "Chandiwala Future Chef Contest 2021," "Hospitality Brain Twister 2021," "Bar Wizard Bar Challenge 2021," "Dress the Cake Challenge 2021," "Chandiwala Towel Origami Competition," na "Oxford Hospitality Brain Twister 2021."
Ihe ịma aka ndị a ga-anwale ihe ọmụma na nka nri nke ụmụ akwụkwọ na-eto eto nke kọleji nchịkwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche na ndị ọkachamara ọkachamara PAN India site na ọnọdụ mebere n'ihi ọrịa COVID-19 na-enwetụbeghị ụdị ya.